यी हुन् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट पाइने सबै सुविधाहरू!
Photo Source : NewsofNepal
कुनै उद्योग खोल्ने सोचिरहनुभएको छ भने तपाईँले नपुगी नहुने ठाँउ हो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय। उद्योग दर्ता गर्ने देखि सिप विकास सम्बन्धि विभिन्न तालिमहरू दिने सरकारी निकाय भएकाले पनि त्यहाँ नपुगी हुँदैन। यो कार्यालयले दिने सुविधाहरू मध्ये केहीलाई हामीले यो लेखमा समावेश गरेका छौँ।
तपाईँले कुनै उद्योग सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरूमै दर्ता गरेर चलउन पाइन्छ।दर्ता नगरी चलाएमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिनेछ। एक पटक दर्ता गरिसकेपछि तपाईँले उद्योग सम्बन्धी नेपाल सरकारले दिएका सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ
उद्योग दर्ता गराइसकेपछि हरेक वर्ष त्यसलाई नवीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
नवीकरणका लागि यी कागजातहरू चाहिन्छ:
सक्कल प्रमाण पत्र
तपाईँको उद्योग तपाईँको साथी, घरका अन्य सदस्य वा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्नुपर्‍यो भने नामसारी गराउन जानुपर्छ। यसका लागि यी कागजातहरू आवश्यक छन्:
लिने व्यक्तिको /नागरिकताको फोटोकपी
दिने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित
छोड पत्र लिखत
कर चुक्ता अथवा राजस्व कार्यालयबाट राय, प्रतिक्रिया
तपाईँले गरिरहनुभएको ठाउँमा उद्योग गर्न समस्या पर्‍यो वा कारण बस अन्त कुनै ठाउँमा सर्नु पर्ने स्थिति आयो भने ठाउँ सारी गर्नुपर्ने हुन्छ। ठाउँ सारी गर्नका लागि यी कागजातहरू चाहिन्छ:
चार किल्ला सहितको सरजमिन
छोड्ने ठाउँको घरेलु कार्यालयको राय, प्रतिक्रिया
व्यवसायमा नाफा भएर तपाईँलाई थप सामाग्री थप्न मन लाग्यो र एउटा मेसिन थप्नुभयो भने तपाईँको व्यवसायको पूँजी बढ्यो। अब तपाईँले मेसिन थपिएको कुरा लिएर पुँजी बढाइदिनु भन्नका लागि घरेलु कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै घाटा हुँदा पुँजी घटाउन पनि घरेलुको कार्यालय जानुपर्छ। यसका लागि तपाईँले यी कागजातहरू घरेलुको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
(ख) फारम (यो फारम कार्यालयले नै दिन्छ)
पुँजी घटाउनु/ बढाउनु पर्ने कारण
उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र च्यातिन, जल्न वा हराउन सक्छ। यसो हुँदा नयाँ प्रमाणपत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई प्रतिलिपी भनिन्छ। यसका लागि यी कागजातहरू चाहिन्छ।
लाग्ने दस्तुर रु.३००
नाम संशोधन र परिवर्तन:
व्यवसायको नाम मन नपरेमा वा अरू कुनै कारणवश आफ्नो उद्योगको नाम बदल्नु परेमा नाम संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसो गर्न यी कागजातहरू आवश्यक छन्:
रु. १ को टिकट
लाग्ने दस्तुर रु. ३००
तपाईँले उद्योगमार्फत दिँदै आउनुभएको सेवा वा उद्देश्य कुनै पनि बेला बदल्नु पर्ने हुन सक्छ। जस्तै: तपाईँले किराना पसल चलाउँदै हुनुहुन्छ र अब सँगसँगै होटेल पनि राख्न लाग्नुभएको छ भने त्यसलाई उद्देश्य परिवर्तन भनिन्छ। यसका लागि यी कागजातहरू चाहिन्छ:
उद्योगमा बिजुलीको भोल्टेज बढाउनु परेमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिस चाहिन्छ। सिफारिस लिनका लागि यी कागजातहरू बुझाउनु पर्छ:
विविधता थप गर्नु पर्ने कारण
साझेदारी र प्राइभेट:
एक जना भन्दा बढी व्यक्तिले उद्योग चलाउँदै छ भने त्यसलाई साझेदारीमा गरिएको उद्योग भनिन्छ।
एक्लैले संचालन गर्ने व्यवसायलाई प्राइभेट फर्म भनिन्छ।
साझेदारी फर्मबाट प्राइभेट फर्ममा परिवर्तन:
साझेदारी फर्मबाट प्राइभेट फर्ममा परिवर्तन गर्न यी कागजातहरू चाहिन्छ:
सम्बन्धित साझेदार उपस्थित भई छोड पत्र लिखतमा सनाखत गर्ने
एकल हकदार को फोटो २ प्रति र नागरिकताको फोटोकपी
लाग्ने दस्तुर (पुँजीको आधारमा)
प्राइभेटबाट साझेदारी फर्ममा परिवर्तन:
प्राइभेटबाट साझेदारी फर्ममा परिवर्तन गर्न यी कागजातहरू चाहिन्छ:
साझेदारीहरूको सामूहिक कबुलियतनामा
साझेदारीहरूको हक र निस्सा छुट्ट्याइएको विवरण वा प्रमाण
साझेदारीहरूको फोटो २ प्रति र नागरिकताको फोटोकपी
खारेजी: तपाईँ कुनै कारणवश उद्योग चलाउन सक्नुभएन भने बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि छुट्टै प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यस्तै उद्योग चलाउने व्यक्तिको मृत्यु भयो भने सो व्यक्तिको नातेदारले पनि उद्योग बन्द गर्न सक्नेछन्। यसका लागि यी कागजातहरू आवश्यक छन्:
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र (यदि उद्यमीको मृत्यु भएमा)
निवेदकको नाता प्रमाणित (यदि उद्यमीको मृत्यु भएमा)
मान्नुहोस् तपाईँले गाई पालिरहनु भएको छ। तपाईँले कुनै पत्रपत्रिका वा कुनै सूचना माध्यमबाट पशुपालनमा सरकारले ऋण दिने खबर सुन्नुभयो। अब तपाईँले त्यो ऋण लिनका लागि सिफारिस बुझाउनुभयो भने ऋण पाउने सम्भावना बढी हुन्छ। सिफारिसपत्र बनाउनका लागि यी कागजातहरू चाहिन्छ:
स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने
सिफारिस गर्नु पर्ने पुष्ट्याइ
कुनै पनि उद्योगले एउटा कामका लागि उद्योग सुरु गर्ने भनेर त्यो सँगसँगै अरू काम पनि सञ्चालन गरिरहेको हुन सक्छ। यसरी ढाँटेर छलेर काम भइरहेको हुन सक्छ। त्यस्तै धेरै ठाउँमा गर्नुपर्ने सरसफाइ नगरिएको भेटिन्छ। यसरी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काममा पनि घरेलु तथा साना कार्यालय सक्रिय हुन्छ।
उद्योग नवीकरण कसरी गर्ने? (आवश्यक कागजात र दस्तुर...
कुनै पनि किसिमको उद्योग संचालन गर्दै हुनुहुन्छ...
उद्योग दर्ता कहाँ र कसरी गर्ने? (दर्ता र...
कुनै पनि उद्योग आधिकारिक रुपमा संचालन गर्नका...